Cherry Tamaris: nkọwa nke ụdị dịgasị iche na foto ya, àgwà na àgwà nke ịkọ ihe - Ugbo - 2020
Obere cherry na nnukwu nwere - Tamaris dịgasị iche iche
O siri ike ịchọta otu ụlọ dị na Russia, nke dị nso nke a gaghị enwe obere ogige nri ma ọ bụ ogige. Onye ọ bụla nwe ubi dị otú ahụ na-achọ iji jupụta n'ọtụtụ mkpụrụ osisi ndị kachasị elu.
Ọ bụrụ na anyị cheta na mkpụrụ osisi cherry bụ otu n'ime mkpụrụ atọ a kacha asọpụrụ na Russia, anyị nwere ike iche na ọganihu nke ụdị dịgasị iche iche na iji nlezianya mee ya.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izuzu zuru oke maka obere ụlọ ndị Russia - ala dị elu, ịdị mma na mkpụrụ magburu onwe ya - na-enye cherry tamaris, nkọwa zuru ezu banyere ụdị dịgasị iche iche, nyocha na ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọrụ ubi nwere ahụmahụ n'ọdịnihu na isiokwu ahụ.
Ụdị cherry Tamaris
Akụkọ banyere ozuzu na mpaghara ozuzu
Otu n'ime ihe ndị bụ isi nke cherry dị ka ubi ubi na-adị adị ma nọgide na-adị elu.
Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ihe ọhụrụ enweghi ike mkpụrụ osisi na-abịa site na uru ndị dị iche iche dị ka umu ohia dị.
Otu n'ime ha bụ oghere kachasị elu nwere na saịtị ahụ (nke na-enye gị ohere itinye osisi ndị ọzọ n'ókèala), nlekọta dị mfe na owuwe ihe ubi.
Ke adianade do, osisi cherry dị ala na-adịkarị mma karịa "ụmụnne" ha dị ogologo, emeziri ka ọ bụrụ ọnọdụ nke mmiri miri emi dị n'elu ala.
Otu ọkachamara kachasị mma nke ama ama Ụlọ Ọrụ Rụshịkụ na Nọọsụ Russia niile. I.V. Michurin (Michurinsk, Tambov mpaghara) maka mwepụ nke mkpụrụ osisi nkume, nke na-arụpụta ihe na nke oyi-hardy, dịgasị iche ma e wezụga ezigbo ụtọ mkpụrụ ahụ, bụ onye na-eme nchọpụta ụlọ akwụkwọ ahụ Tamara Morozova. Ọ bụ ya ghọrọ onye edemede nke Tamaris. Aka ya nwekwara ụdị nzacha edozi Morozova, Lebedyanskaya.
Cherry ghọrọ ụdị "nne na nna" maka ozi ọma ozuzu Na-eji oji. Na usoro nke nhọrọ, a na-eme ka mkpụrụ ya na-eto eto na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-agbanwe agbanwe. Iche nke ethylenimine mutagenic bụ nanị 0.005%.
Na 1994, e webatara ụdị ọhụrụ dị iche iche n'ime aha mpaghara dị iche iche nke Russia. E gosipụtara ebe nkesa a kachasị mma. Central Black Earth na North Caucasus mpaghara Russia.
Mana n'oge ugbu a, a naghị enwe mmasị na ọka a na mpaghara ndị ọzọ Russia.
Na mpaghara ndị a, ha na-eche ezi ma na-enye mkpụrụ dị iche iche dịka Kharitonovskaya, Chernokorka, Fairy na Black Large.
A na-eji udiri nke ụdị akọwapụtara akọwa ihe ịrịba ama ndị a:
Ọ bụ onye dị ala na-eto eto. 1.7-2 m elu Ọ na-etolite ruo n'ogo elu 2,5 m.
Okpueze, alaka. A na-eme ka okpu okpueze zuru oke, kpuchie ya n'elu osisi. A na-eji onye na-ajụ (mgbe ụfọdụ obere karịa nkezi) ọkpụrụkpụ na iche elu. Ogbugbo na akpati na isi alaka nwere agba aja aja. Osisi mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ.
Ome. Enwe ogologo ogologo. Agba - nke kachasị aja aja na tinge aja. Na Ome, a na-amalite obere lentil. Ndị na-eto eto na Ome na-enwe ọdịdị dị mma ma na-agbapụ ntakịrị site na ịse onwe ya.
Doo. Ihe dị iche - akụkụ nke oke, ọnụnọ n'akụkụ ezé bicuspid, akwa dị ụtọ.
A na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Enweghi ike.
N'okpuru akwukwo ọ bụla, a na-ahụ obere obere ogige uhie uhie. A na-edebe akwukwo a n'alaka ụlọ ọrụ site na mkpirikpi, ọkara oge azu.
Akwụsị ụkwụ Osisi okooko okooko osisi na-acha odo odo dị ka obere roses. Akpụkpọ ụkwụ nke ọ bụla nwere silhouette. Ụdị oge okooko - mbubreyo.
Mma nnukwu mkpụrụ osisi (nkezi bred ibu ọkwa site na 3.8 ruo 5 g) ọdịdị dị iche iche. N'elu mkpụrụ osisi ahụ, ọ dị ntakịrị ka ọ dị ntakịrị, isi na-egosi obere ịda mbà n'obi, na afọ ahụ, e nwere ntakịrị iyi.
Vianok, Ụlọ Uhie na Onye Na-anụ Ụba nwere ike ịnya isi nnukwu mkpụrụ.
Peel na-acha odo odo (odo odo)., na mkpụrụ osisi na-egosi ntakịrị obere coverlips nke agba aja aja. Ụdị anụ ahụl nwere ederede dị nro na ọtụtụ ihe ọṅụṅụ.
Banyere nnukwu ọkpụkpụ ọdịdị dị iche iche na-adị mfe iche na pulp. Na-ejide mkpụrụ na nkezi ọkpụrụkpụ nke azuokokoosisi. N'etiti mkpokoro osisi na mkpụrụ ya n'onwe ya enwere oyi akwa.
Cherry Tamaris bụ ụdị onwe-fertile mkpụrụ osisi a kụrụ. N'ihi na pistil dị nhata nke kachasị nhata (nke beri na-amalite na ya) na stamens, n'azụ nke pollen fertilizing dị n'ime ya, ovary nke nwa ebu n'afọ n'ọdịnihu na-ewere ọnọdụ n'ime obere ifuru.
Isi ihe a na - enye aka na - azụlite ovaries na - arụ ọrụ ma na - emezi ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka mmepe ha.
Ihe omuma nke Tamaris pụtara na ụdị udiri a enwe ike ịmị mkpụrụ n'ebughị òkè na pollination usoro nke ndị ọzọ pollinators, ọ bụ naanị n'ihi njikọ onwe onye.
Ndi oru ugbo ndi okachamara nwere ike ikwu na onu ogugu di iche iche na-abawanye n'oru ma oburu na achoputa ndi ozo na-esote ya - Turgenevka, Zhukovskaya, Lyubskaya cherry trees.
N'akụkụ ahụ, ọ dị mma iburu n'uche na ụdị dị iche iche akọwapụtara, nke ya, bụ àgwà pollinator maka ụfọdụ ụdị cherị.
Volochaivka, Novella na Yenikeev Memories dị iche iche.
Dị ka ihe ndị e kwuru si kwuo, mkpụrụ nke osisi dị otu nke malitere ịmị mkpụrụ ruo afọ 2-4 nke ndụ gịbụ mkpokọta 8-10 kg.
Na ọnọdụ nke obodo Michurinsk - ala nnabata nke Tamaris dị iche iche - owuwe ihe ubi nke cherry a site na otu hectare bụ 65 -80 centent.
Ezi mkpụrụ na-egosiputa iche Nadezhda, Shubinka, Uralskaya Rubinovaya na Rossoshanskaya nwa.
A na-akwalite ezigbo arụpụta ihe, karịsịa, site na otu ihe dị mkpa nke cherry a - nnọọ okwu mmechi nke maturation.
Nke a na-enyere osisi ahụ aka izere mmetụta ọjọọ na mkpụrụ osisi ndị na-amịpụta site na frosts, dị adị ma na-agakarị na mmalite oge opupu ihe ubi. A na-ejikarị ịcha chara acha tomato n'afọ nke abụọ nke July - na mbido August.
Site na oge mkpụrụ osisi na-achacha acha, ọ na-aghọ àgwà nke ụdị dị iche iche. ụtọ na uto uto. Ọzọkwa, ụtọ dị na ya ka dị elu karịa acidity (a kwenyere na acidity dị n'ogo).
Ngwurugwu ihe omumu nke tomato tamaris bu ihe ndia:
Ọnụ ọgụgụ nke
Ascorbic acid 38 mg / 100 g
E kwesịkwara icheta ya elu elu nke hardiness nke osisi ya.
Tụkwasị na nke ahụ, ntakịrị obere osisi nke ụdị dịgasị iche iche bụ nhọrọ dị mma maka ebe dị n'ógbè ahụ nke nwere ifufe siri ike: alaka ndị dị mkpirikpi n'okpuru nkuku nke ifufe na-adịtụghị adị.
N'ozuzu ya, cherry Tamaris bụ ụdị dịgasị iche iche a na-emegharị nke ọma maka ọdịdị mbara igwe na ala nke etiti Russia.
N'etiti oyi-hardy iche, onye kwesịrị ntị ka Vyanok, Zhukovskaya na Morozovka.
Ka osisi nke dịgasị iche iche na-etolite n'ụzọ dị mma n'ọdịnihu, ọ dị mma ma na-amị mkpụrụ ma ọ dịghị emerụ ahụ, mgbe ọ ka dị obere, a ghaghị ịkụ ya na saịtị kwesịrị ekwesị nke na-egbo mkpa nke ọrụ ugbo.
Ihe ndị a gụnyere: nnukwu igwe na-ekpo ọkụ, ezigbo ikuku nke mpaghara ahụ, mmiri zuru ezu nke miri mmiri, yana ọnụnọ nke ìhè, ala na-adịghị ọcha na ala.
Emere cherry ka ma ke ini utọma ke mgbụsị akwụkwọ. N'okwu mbụ, nke a ga - eme n'ihu mkpughe nke akụrụ, nke abụọ - ọ bụghị mgbe e mesịrị ka Ọktoba.
Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, akuku mmiri dị mma n'ihi ihe ize ndụ nke kefriza nke seedling na ọdịda, na mmalite nke mbụ frosts.
Ebe ọ bụ na okpukpu abụọ nke Tamaris na-ezo aka na mkpuru osisi, a ghaghị kụrụ ya n'ụzọ dị otú ahụ nke ga-abụ mkpụrụ osisi kacha nso ọ bụghị ihe na-erughị 2 mita.
Ịgha mkpụrụ seedlings buru n'olulu ọdịda, ihe omimi na dayameta nke kwesiri 50 cm.
N'ọnọdụ ọ bụla, usoro mgbọrọgwụ dum nke osisi ahụ kwesịrị ịdị kpamkpam ma tinye ya na olulu a gwọrọ.
Mgbe a gwuru olulu, ngwakọta nke humus, superphosphate (40 g), potassium chloride (20-25 g) na osisi ash (ihe dị ka 1 n'arọ).
N'ihe banyere akwa ọdịnaya nke ụrọ na ala, otu ịwụ nke osimiri nkịtị osimiri na-wụba n'ime oghere.
Tupu akuku, ọ dịkwa mkpa ịkwadebe sapling n'onwe ya, karịsịa maka mgbọrọgwụ. O b ur u na ha emejup utara mmebi, ha ghagh i ibe ha. Mkpụrụ mgbọrọgwụ kwesịrị Jide n'aka na mmiri, na-etinye ọ dịkarịa ala awa 2-3.
Ozugbo ị rute na etiti fossa na-ebugharị n'osisi osisi, bụ nke, mgbe e mesịrị, maka nkwụsi ike karị, nwata, ọ bụghị osisi siri ike ga-agbụ.
A ghaghị itinye mkpụrụ osisi ahụ n'ime oghere ahụ, jiri nlezianya na-edozi usoro mgbọrọgwụ. Mkpụrụ ahụ aghaghị ịdị n'ụzọ ziri ezi ziri ezi, ke edem edere ikpehe akwa.
Mmiri ahụ na mkpụrụ osisi nke e guzobere na ya, ala nke e gwuru na ya ma jikọta ya, jupụtara na obere obere fatịlaịza.
Ala na ala nke akpati neatly tamped, na na radius nke 50 cm site na akpati-eme ka ala ala. Ọfụfụ si otú ahụ guzobe Wunye 2-3 bọket nke oyi na mmiri eburu mmiri.
Ya mere na emesia enweghi mmiri ngwa ngwa nke mmiri ma ghara ikpuchi ala, a na-ekpuchi ụkwụ nke seedling 2 cm oké oyi akwa nke compost ma ọ bụ sawdust mulch.
Nlekọta uzo di iche iche nke Tamaris di n'usoro omenala nke ihe ndi di iche iche - na mgbe nile ịsa mmiri oge ịtọ ala, fertilizing na kwachaa.
Potash phosphate nri na-agbakwụnyekarị n'oge mgbụsị akwụkwọ na-egwu ala.
N'oge opupu ihe ubi n'okpuru cherry ohia na-atụnye nitrogen nri.
Organic fatịlaịza (compost, nri) ẹkenam ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ atọ.
Uwe elu n'elu n'ụdị nke mullein na uyi igosi ugboro abụọ na oge - n'oge na izu 2 mgbe okooko osisi.
Anyị ekwesịghị ichefu oge nile nke mkpirikpi. N'ọnọdụ nke Tamaris, ọ dị mkpa, ebe ọ bụ na alaka ndị dị n'okpuru ibu nke ezigbo owuwe ihe ubi nwere ike ịkwụsị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iche iche maka ubi gị, ṅaa ntị na Volochaevka, Moscow Griot and Toys.
Lelee vidiyo na nkọwa zuru oke nke iwu nke kụrụ cherị.
Iji zere ogbugba nke ogwu site na mkpurugwu n'oge oyi, a ghaghi ichebe osisi tupu oge eruo. Onye ọ bụla nwere ike ime nke a. ihe siri ike, nke a na-agbanye gburugburu osisi okpokoro n'ehihie nke oyi.
E kwesịkwara icheta ya nnọọ elu iguzogide nke a dịgasị iche iche ka nkịtị fungal ọrịa coccomycosis. Ụdị dị iche iche dị ka Princess, Minx, Ashinskaya, Fairy na-emegide ihe otiti a.
Tamaris bụ obere osisi cherry nwere nnukwu ike.
Eziokwu, n'enweghị ọrụ mmadụ - isi ike, ma ọ bụ ọṅụ - ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikpughe ya.
Ụgwọ kwesịrị ekwesị maka mgbalị nile ga-abụ ihe ụtọ nke mkpụrụ ya na-enye.